व्यापारको पनि जीवन हुन्छ : शेष घले | Purnapusti
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा व्यवसाय गरिरहेका एकजना धनाढ्य नेपाली हुन् । लगातार दुई कार्यकाल संघको नेतृत्वमा गरेपछि उनी आगामी अक्टोबर १७ पछि विदा हुँदैछन् । उनको चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा, भूकम्प र बाढीपीडितलाई गरेको राहात केन्द्रित भएर नागरिकन्युजका लागि कृष्ण ढुंगानाले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्वार्ता
गैर आवासीय नेपाली संघले हालसालै सप्तरीका बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेर फर्किनु भएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ र?
राजमार्गका छेउछाउ मात्र राहत पुगेको भनेर विभिन्न जिल्लाबाट समाचार नै आयो । तपाइँहरुले कहाँ कहाँ वितरण गर्नुभयो र?
यो बिडम्नापूर्ण स्थिति मैले पनि देखेँ । हाम्रो टोली सप्तरी पुग्दा राजमार्गमा राहत वितरणको काम भइरहेको थियो । हामीले योजनाबद्ध रुपमै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गर्‍यौं । कहाँ पुगेको छैन रु कहाँ खाँचो छ त्यो ठाउँ हामीलाई देखाइदिनोस् हामी त्यहाँ जान्छौं भन्यौं। गैरआवासीय नेपाली संघले राहत वितरण गरेका स्थानहरु ग्रामीण इलाकाहरु हुन् । बोदेबसाइन, तिलाठी, कोहिलारी बसाइन र कोमध्यपुरामा हामीले राहत वितरण गर्‍यौं। तपाइँ तथ्य जाँचका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले राहत पुर्‍याएका स्थानहरु कस्ता हुन् भनेर ।
जीवन बाँच्ने दृष्टिबाट म मध्यविन्दू पार भएँ होला तर व्यवसायिक हिसाबले म भर्खर बिऊ रोप्दै गरेको अवस्थामा छु। एमआइटी ग्रुपको लगानीमा मेलर्बनस्थित भिक्टोरिया मार्केट नजिकै दुई टावर निर्माण हुँदैछन् । तिनमा ४७० अर्पाटमेन्ट तथा २१० कोठाको होटल बन्नेछ । मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ९एमआईटी० भर्खर २२ वर्ष लाग्दैछ।
९केही बेर घोत्लिएर० भूकम्पको बेला राहत वितरण गरेर फर्किएको अवस्थामा त्यो कुराकानी भएको थियो क्यार। जीवन दर्शन, अध्यात्मतिर जानुभयो भने त्यहाँ तपाइँले कठिन प्रश्नहरुको सरल जवाफ पाउन सक्नुहुन्छ। रहस्यहरु पनि भेटाउनु होला। तर भौतिक र सांसारिक परिप्रेक्ष्यमा ती प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु त्यति सहज हुँदैन। हामीसँग प्रत्येक विषयलाई हेर्ने कोण छन्, मस्तिष्क मन्थनका फरक पृष्ठभूमि छन्। तपाइँले भनेको कुरा सापेक्षित रुपमा सत्य हो। हामीलाई कल्याणकारी काममा डोर्याउने पक्षहरु पनि सायद मेरो अवचेतनमा रहेका त्यस्तै विषयहरु होलान्।
जीवनको यात्रा एउटा अनवरत चल्ने प्रक्रिया रहेछ। तपाइँ सुत्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, पैसा आर्जन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् जे गरे पनि जीवनको नदी एउटै गतिमा बगी नै रहन्छ। तर यो जीवनलाई सक्रिय र सार्थक रुपमा बिताउनुपर्छ भन्ने विषयको सान्दर्भिकता आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। कहिलै कहीँ फुर्सद हुँदा म आफैँ व्यवसायिक रुपमा कहाँ आइपुगेँ भनेर सोच्छु। यसरी हेर्दा के देखिँदो रहेछ भने आफूभन्दा तलतिर हेर्दा ओहो केही गरिएछ भन्ने हुन्छ । माथितिर फर्केर हेर्‍यो भने अझै धेरै गर्न बाँकी छ जस्तो देखिन्छ, अवसर छोप्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । भूकम्पछि काम गर्दै आउँदा मभित्र एउटा फरक किसिमको आत्मविश्वास जागेको छ। त्यो के भने कुनै दिन मैले सबै सम्पत्ति दान गरेँ अथवा टाट पल्टिएँ भने पनि नेपालका भीरपाखामा सुखपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ।
जीवन बाँच्ने दृष्टिबाट म मध्यविन्दू पार भएँ होला तर व्यवसायिक हिसाबले म भर्खर बिऊ रोप्दै गरेको अवस्थामा छु। एमआइटी ग्रुपको लगानीमा मेलर्बनस्थित भिक्टोरिया मार्केट नजिकै दुई टावर निर्माण हुँदैछन् । तिनमा ४७० अर्पाटमेन्ट तथा २१० कोठाको होटल बन्नेछ । मेलबर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ९एमआईटी० भर्खर २२ वर्ष लाग्दैछ । यसलाई म व्यापारभन्दा शैक्षिक संस्था भन्न रुचाउँछु । पूर्वीय दर्शनले मान्छेको पुर्नजन्म हुन्छ भन्छ । मलाई हिजोआज कताकता व्यापारको पनि जीवन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मान्छेको आयुभन्दा व्यापारको जीवन लामो जस्तो देखिन्छ ।